Ndị Eze nke Abụọ 3:1-27
Jehoram malitere ịchị Izrel (1-3)
Ndị Moab nupụụrụ ndị Izrel isi (4-25)
E meriri ndị Moab (26, 27)
3 Jehoram+ nwa Ehab nọ na Sameria malite ịchị Izrel n’afọ nke iri na asatọ n’ọchịchị Jehoshafat eze Juda. Ọ chịkwara afọ iri na abụọ. 2 Ọ nọ na-eme ihe jọrọ njọ n’anya Jehova, ma o merughị ka nne ya ma ọ bụ ka nna ya, n’ihi na ọ kụturu ogidi arụsị Bel nke nna ya rụrụ.+ 3 Ma, ọ nọgidere na-eme mmehie niile Jeroboam nwa Nibat mere, ndị mekwara ka ndị Izrel mehie.+ Ọ hapụghị ha. 4 Misha eze Moab na-akpa atụrụ, na-atụkwara eze Izrel ụtụ. Ihe ọ na-eji atụrụ ya ụtụ bụ otu narị puku (100,000) ụmụ atụrụ na otu narị puku (100,000) ebule a na-akpachaghị ajị. 5 Ozugbo Ehab nwụrụ,+ eze Moab nupụụrụ eze Izrel isi.+ 6 N’ihi ya, Eze Jehoram si na Sameria pụọ n’oge ahụ gaa kpọkọta ndị Izrel niile. 7 O zikwara Jehoshafat eze Juda ozi, sị: “Eze Moab enupụrụla m isi. Ị̀ ga-eso m gaa lụso ndị Moab agha?” Jehoshafat asị ya: “M ga-aga.+ Mụ na gị bụ otu. Ndị m na ndị gị bụ otu. Ịnyịnya m na ịnyịnya gị bụkwa otu.”+ 8 Jehoshafat ajụọ ya, sị: “Olee ụzọ anyị ga-esi gaa?” Ya asị: “Ọ bụ ụzọ ala ịkpa Ịdọm.” 9 Eze Izrel na eze Juda na eze Ịdọm+ wee gawa. Mgbe ha gagidere ruo ụbọchị asaa, e nweghịzi mmiri ndị agha ha na anụ ụlọ ndị so ha ga-aṅụ. 10 Eze Izrel asị: “Ezigbo nsogbu adịla! Jehova kpọpụtara anyị, bụ́ ndị eze atọ, ka o nyefee anyị n’aka ndị Moab!” 11 Jehoshafat asị: “Ọ̀ bụ na e nweghị onye amụma Jehova ebe a ka anyị si n’aka ya jụọ Jehova ase?”+ Otu n’ime ndị na-ejere eze lzrel ozi asị: “Ịlaịsha+ nwa Shefat nọ ebe a. Ọ bụ ya nọ na-ejere Ịlaịja ozi.”*+ 12 Jehoshafat asị: “Ọ ga-agwa anyị ihe bụ́ uche Jehova.” Eze Izrel na Jehoshafat na eze Ịdọm wee gakwuru ya. 13 Ịlaịsha asị eze Izrel: “Gịnị jikọrọ mụ na gị?+ Gakwuru ndị amụma nne gị na ndị amụma nna gị.”+ Ma eze Izrel sịrị ya: “Mba, n’ihi na ọ bụ Jehova kpọrọ anyị, bụ́ ndị eze atọ, ka o nyefee anyị n’aka ndị Moab.” 14 Ịlaịsha asị ya: “Eji m Jehova nke ụsụụ ndị agha, onye dị ndụ na onye m na-efe,* na-aṅụ iyi na a sị na Jehoshafat+ eze Juda anọghị ebe a, agaraghị m ele gị anya, ma ya fọdụzie ịtụpụrụ gị ọnụ.+ 15 Kpọtaranụ m onye na-akpọ ụbọ akwara.”*+ Ozugbo onye na-akpọ ụbọ akwara bidoro ịkpọ ya, Jehova nyere Ịlaịsha ike.+ 16 Ya asị: “Jehova kwuru, sị: ‘Gwuonụ ọtụtụ olulu na ndagwurugwu a, 17 n’ihi na Jehova kwuru, sị: “Ifufe agaghị efe, mmiri agaghịkwa ezo, ma mmiri ga-eju na ndagwurugwu a,+ unu ga-aṅụkwa mmiri si na ya, unu na anụ ụlọ unu na anụmanụ unu ndị ọzọ.”’ 18 Ma, ihe a enweghị ihe ọ bụ n’anya Jehova.+ Ọ ga-enyefekwa ndị Moab n’aka unu.+ 19 Kwatuonụ obodo niile a rụsiri ike+ na obodo niile mara mma, gbutuonụ osisi niile dị mma, sụchienụ isi mmiri niile, tụjuokwanụ nkume n’ala niile dị mma ka ha ghara ịba uru ọ bụla.”+ 20 N’ụtụtụ ụbọchị ahụ, mgbe o ruru oge e ji achụ àjà ọka,+ mmiri si ná mpaghara Ịdọm malite ịsọdata, nke mere na mmiri juru na ndagwurugwu ahụ. 21 Mgbe ndị Moab niile nụrụ na ndị eze atọ ahụ abịala ịlụso ha agha, ha kpọkọtara ụmụ nwoke niile ga-agali agha,* ha agaa guzoro n’ókè ha na ndị ala ọzọ. 22 Mgbe ndị Moab pụtara n’isi ụtụtụ ụbọchị ahụ, anwụ nọ na-acha mmiri ahụ, ya adị ndị nke nọ n’akụkụ nke ọzọ ka mmiri ahụ ọ̀ na-acha uhie uhie ka ọbara. 23 Ha asị: “Lekwanụ ọbara! Ọ ga-abụrịrị na ndị eze ahụ ejirila mma agha gburịta ibe ha. Ndị Moab, gazienụ kwata ihe ha!”+ 24 Mgbe ndị Moab batara ebe ndị agha Izrel mara ụlọikwuu, ndị Izrel biliri malite igbu ha, ha agbaa ọsọ.+ Ma, ndị Izrel chụụrụ ha banye Moab, gburu ha na-aga. 25 Ha lakwara obodo ha dị iche iche n’iyi. Onye nke ọ bụla tụbakwara nkume n’ala ọ bụla dị mma, tụjuo ala ndị ahụ na nkume. Ha sụchiri isi mmiri niile,+ gbutuokwa osisi niile dị mma,+ ya afọ naanị mgbidi Kia-hareset.+ Ma, ndị na-agba èbè* gbara obodo ahụ gburugburu ma lụso ya agha. 26 Mgbe eze Moab hụrụ na e meriela ya n’agha ahụ, ọ kpọọrọ narị ụmụ nwoke asaa (700), ndị ji mma agha, ka ya na ha si ná mpaghara ebe eze Ịdọm+ nọ gbapụ, ma ha agbapụlighị. 27 Ihe o meziri bụ ịkpọrọ ọkpara ya, onye kwesịrị ịnọchi ya, jiri ya chụọ àjà n’elu mgbidi ka ọ bụrụ àjà a na-esu ọkụ.+ Ihe a mere ka ndị mmadụ wesa ndị Izrel ezigbo iwe, kwụsịzie ịlụso eze Moab agha, laghachikwa n’obodo ha.
^ Ma ọ bụ “nọ na-awụsa Ịlaịja mmiri n’aka ka ọ kwọọ aka.”
^ Ma ọ bụ “onye egwú.”
^ Ma ọ bụ “ụmụ nwoke niile na-eke ájị̀ n’úkwù.”